Wax ka qabashada Akhriska / qorista Sayniska ee Afrika iyada oo loo marayo Helitaan Furan - AfricArXiv
Helitaanka furan (OA) waa aasaaska mabaadii'da iyo dhaqammo fara badan oo natiijooyinka cilmi-baarista loogu kala qaybiyo internetka, lacag la'aan ama caqabado kale oo marin-u-helitaan ah. AfricanArXiv iyo Shabakada Sayniska Akhriska Afka ee Afrika (ASLN) waxay iska kaashanayaan sidii kor loogu qaadi lahaa soo gudbinta maqaallada ku saabsan AfrikaArXiv iyo tarjumida qodobbadaas si ay uga dhigaan kuwa ugu fudud ee bulshada afafka kala duwan ee afafka kala duwan ku hadla.
Waxaa la aasaasay bishii Juunyo 2018, AfricanArXiv waxay u adeegtaa sidii kayd horudhac ah oo loogu talagalay natiijooyinka aqooneed ee saynisyahannada Afrikaanka iyo sidoo kale saynisyahano aan Afrikaan ahayn oo ka shaqeeya mawduucyada Afrika. AfricArXiv waxay u heellan tahay xawaareynta iyo furitaanka cilmi-baarista iyo wada-shaqeynta ka dhexeysa saynisyahannada Afrikaanka ah iyo gacan ka geysashada dhismaha mustaqbalka wada-xiriirka aqoonta leh.
Sawirka: Shabakada Wax Akhriska ee Sayniska Afrika
Shabakadda Akhriska Sayniska Afrikada (ASLN) waa iskaashi ka dhexeeya saynisyahano iyo suxufiyiin, waxaa la bilaabay Oktoobar 2019 dalka Nigeria XIGASHO Afrika, si loo taageero isgaarsiinta sayniska ee saxda ah bulshada guud. ASLN waxay ka shaqaysaa sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga ku saabsan ahmiyada sayniska u leedahay nolosheena, bulshada iyo mustaqbalkeeda, kala saarida fikradaha qaldan ee sayniska isla markaana kor loogu qaado astaanta cilmi baarista Afrika. Shaqadani waxay gacan ka geysaneysaa isku xidhka farqiga u dhexeeya sayniska, bulshada iyo siyaasada, taas oo aan aaminsanahay inay gacan ka geysan doonto fududeynta kor u kaca Afrika ee ah awood sare oo saynis ah. Hadafka ugu dambeeya ee cilmi baarista sayniska waa inuu ahaadaa mid saameyn ku leh bulshada. Si kastaba ha noqotee, inta badan cilmi baaris la daabacay ayaa ka dambeysa mushaharka, taasina waxay keentay, in la yareeyo saameynta natiijooyinka bulshada ku yeeshaan. Iyada oo loo marayo iskaashigan, waxaan rajeyneynaa in aan sare u qaadno marin u helista cilmi baarista ka socota Afrika oo aan u marineyno suxufiyiintayada, kor u qaadista wacyiga ku aaddan muhiimadda ay cilmibaarayaashaani u leeyihiin dadweynaha iyo dadka ay quseyso.
Akhriska sayniska waxaa lagu sharixi karaa siyaabo kala duwan. Mid ka mid ah sharraxaadahaasi wuxuu noqon doonaa: tiro xirfado iyo karti ballaaran oo u baahan in la horumariyo si loo raadiyo, loo fahmo, loo qiimeeyo loona isticmaalo macluumaadka, oo ay ku jiraan awoodaha lagu fahmo fikradaha sayniska iyo waxyaabaha ku jira (Muir, J, (2016) Muxuu yahay qorista Sayniska?). Waa muhiim in la garto doorka wadaagida aqoonta maxalliga ah iyo kaqeybgalinta dadweynaha ee diyaarinta diyaarinta sayniska ee shaqsiyaadka iyo jaaliyadaha dalalka Afrika. Waxqabadyo badan oo caalami ah ayaa had iyo jeer u qaadata isticmaalka Ingiriisiga, Carabiga ama Faransiiska. Si kastaba ha noqotee, dadaallada qorista ee sayniska iyadoo la adeegsanayo isgaarsiinta afka, qoraalka fudud, animation ee luqadda maxalliga ah waxay leeyihiin ku lug lahaansho weyn, hawlgelin, iyo saameyn. Sidaa darteed, isticmaalka luqadda maxalliga ah ee dhaqanka deegaanka maxalliga ah looma maleyn karo.
Fursado loogu talagalay barashada cimriga oo dhan ee meela aan rasmi ahayn ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Marka la fiiriyo udub dhaxaadka sii kordhaya ee sayniska iyo teknolojiyadda bulshada casriga ah, waxbarashada rasmiga ahi waa inay qalabeysaa dadka intiisa badan inay cilmi ahaan wax bartaan laakiin dadka aan ilaa hadda ka faa iidaysan, su’aashu waxay tahay sidee baa farqiga aqoonta loo buuxin karaa? Ma suurta galbaa in laga fikiro marka la eego kufsiga dadka waaweyn sanduuqa 'aalad' aasaasiga ah ee aqoonta iyo xirfadaha ku saabsan sayniska iyo tikniyoolajiyadda? Kuwani waxay u badan tahay inay guuleystaan ​​haddii dadaalladu ay la xiriiraan arrimo gaar ah oo quseeya nolol maalmeedka shaqsiyaadka iyo bulshooyinka deegaankooda. Desirably, waxbarashada sayniska, labadaba qaab rasmi ah iyo mid aan rasmi ahaynba, waxay wax weyn ku kordhin karaan isfahamka sayniska iyo kobcinta qorista sayniska.
AfricArXiv waxay ka shaqeysaa inay kiciso cilmi baaris baahsan oo ka dhacda qaarada dhexdeeda iyo sidoo kale caalamka oo dhan hey'adaha cilmi baarista ee dibadaha iyagoo fududeynaya meel gaar ah oo loogu talagalay bulshada cilmi baarista Afrika. Faa'iidooyinka badan ee kaydka hore ee loo qoondeeyay ee Afrika waxaa ka mid ah kordhinta aragga ee wax soo saarka cilmi baarista Afrika, kobcinta iskaashiga qaaradaha, iyo fursadda in lala wadaago natiijooyinka cilmi baarista ee luqadaha Afrika.
“TReND in Africa waxay ku faraxsantahay inay la xiriirto AfricaArXiv iyo ASLN si loo kobciyo loona xoojiyo isgaarsiinta sayniska iyo sayniska furan. Sayniska ay dowladdu maalgaliso wuxuu soo saaraa aqoon ay leedahay dhammaan. Hubinta in xiriiriyaasha sayniska ay la xiriiraan cilmi baarayaasha daabaca daabacadaha iyo qodobbada marin u helka waxay hubineysaa in dadweynaha guud si wanaagsan loogu wargeliyo horumarka sayniska marka ugu horeysa! Hada waxaan ubaahanahay sidii aan u hubin laheyn in macluumaadka ku faafay dadka oo dhan fursad ay ku ogaadaan oo ay naftooda ku ilaashadaan. Samyra, Isuduwaha Guud ee TReND
Sidaad gacan uga geysan karto
Saynisyahan ahaan, ugu gudbi waraaqdaada mid ka mid ah seddexda qalab ee aan isla shaqeynno https://info.africarxiv.org/submit/
Fadlan sidoo kale aqri tilmaamahayaga gudbinta: https://info.africarxiv.org/before-you-submit/
Haddii aad jeceshahay adeegsiga luqadaha Afrikaanka ee caadiga ah ee Sayniska waad ku tabaruci kartaa inaad noo tarjunto qoraalada iyo soo-koobitaanka qoraallada qoraallada ee lala wadaago AfrikaArXiv.
Furitaanka Furan: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
Akhriska Sayniska: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_literacy
Muir J, (2016) Muxuu Yahay Cilmiga Sayniska? - https://blogs.glowscotland.org.uk/glowblogs/eportfoliojm/2016/02/22/what-is-science-literacy/
(qoraaga / 2017) Akhriska Sayniska ee Wadamada Soo koraya: Sahanka dhulka,: - Warbixinta oo Kooban, http://www.nida-net.org/documents/8/SL_Researcht_Report_Final.pdf
Categories:	iskaashiKala Duwanaanta LuqaddaFuran FuranSayniska Furan